I-single Chrome Lever Wash Basin Mixer Tap Chrome
Ikhaya / Amanzi okugeza / Amafulethi Wokugezela Elingashintshiwe Owodwa / Isixhumi se-Lever Wash Basin Mixer Tap Chrome
Isikhiphi sendwangu yesimanje eyakhiwe ngesibhaxu sangaphezulu sediski yokugezela enamamitha ama-4 wamapayipi e-chrome aletha umuzwa wanamuhla kunoma yiliphi ikhaya. Ukucubungula ubuchwepheshe bokupholisha okuningi futhi ungqimba oluhle lwe-chrome kukhanya kakhulu, kulula ukuwahlanza, futhi kuvimbele ukuklwebeka nokugqwala. Isikhiphi se-waterfall echibini sinebhokisi le-disc ye-ceramic disc engu-1/4 futhi liyakwazi ukumelana nokuhlolwa kwezivivinyo zokuvula nokuvala ezingama-500,000. Ubunjiniyela be-ceramic obuphambili buyinto elula futhi bulungile.
I-30 DAYS limited UKUBUYELA NOKUBUYELA IMALI Isiqinisekiso:Simi ngemuva kwemikhiqizo yethu, wonke ompompi basekhishini asekelwa ngeminyaka emi-3 iwaranti enomkhawulo, ukubuyiselwa kwe-30 DAYS Limited nesiqinisekiso sokubuyiselwa imali. uma kukhona noma yimuphi umbuzo, sicela ukhululeke ukuxhumana nathi, sijabule kakhulu ukunikela ngezixazululo ezifika ngesikhathi
Intelligent okonga amanzi ubuchwepheshe: i-bubbler ingenisa umoya ekugelezeni kwamanzi ukwakha i-bubble enkulu emhlophe, futhi umoya namanzi kuhlanganiswe ngokuphelele ukufeza inhloso yokonga amanzi.
Isibambo se-ergonomic: izivumelwano zokubamba nge-ergonomics, ukubambelela kukhululekile, futhi iswishi iyashelela futhi imahhala
Ifakwe i-hose-proof hose: isakhiwo esiyingqayizivele esingenalo ifindo singavimbela ukubambeka nokuconsa okubangelwa ukudonsa, kusenze sizinze futhi sihlale isikhathi eside.
Isipanji somzimba osindayo: ukupakisha okufaneleke kakhudlwana, ukubukeka kwesitayela nokuhle, akulula ukuwephula, kunciphisa ubungozi bokuhamba
Isici: Amamitha ompompi
Isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu: Single Hole
Inani Lezibambo: Isibambo Esingashadile
Ukwelashwa Kwaphezulu: Ipholile
Izinto Zomzimba: Ithusi
Valve Core Material: bobumba
I-SKU: EVE-0162-chrome Categories: Amanzi okugeza, Amafulethi Wokugezela Elingashintshiwe Owodwa Tags: Isinki sokugeza, ikherishi le-ceramic, isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu
Amompompi Wokuxuba Amhlophe we-White Square Basin
I-WOWOW Bathroom Sink faucet 4 Inch Center Amafutha OMbuso ...
Amatshe Amade We-Vessel Sinks White Square